Puntland oo go'aan ka qaadanaysa muddo-korarsiga Farmaajo | KEYDMEDIA ONLINE
Deni ayaa kulamo wadatashi ah la leh Odayaasha dhaqanka, bulshadda rayidka iyo waxgaradka Puntland.
GAROWE, Soomaaliya - Shirka Gollaha Wasiirada Puntland ee Maanta ka dhacay Garowe waxaa looga hadlay xaaladda dalku marayo, gaar ahaan muddo-korarsiga sharci-darrada ee uu sameystay Farmaajo, kaasoo Gollaha Shacabka uu meel-mariyay 12-kii bishan.
Afhayeenka Madaxtooyadda Puntland Jaamac Deparani, ayaa sheegay in Madaxweyne Deni uu kulamo la qaadan doonaa Baarlamaanka, Ururada Bulshada, Aqoonyahanka, Waxgaradka iyo Qeybaha kala duwan ee Bulshada kahor inta Maamulkiisa uusan soo saarin mowqifkiisa ku aadan muddo-kordhinta sharci-darrada.
"Latashi kadib waxaa ay Puntland soo saari doontaa Moqifkeeda ku aadan tallaabadii sharci darada ahayd ee Baarlamaanka DFS ee wakhtigiisu dhammaaday uu muddo kordhin marsaday Madaxweyne wakhtigu ka dhacay, doorasho inuu qabto ku fashilmay oo raba inuu xoog ku joogo kursiga," ayuu yiri Afhayeenka.
Puntland iyo Jubbaland ayaa lagu eedeeyay inay caqabad ku noqdeen doorashadda Soomaaliya, iyadoo ku xiray wadahadallada shuruudo aan dhamaad lahayn, waxayna Villa Somalia sheegtay in Deni iyo Axmed Madoobe ay u adeegayaan dano shisheeye.
Farmaajo waxaa soo wajahay caqabado waaweyn oo kala kulmay muddo-kordhinta, iyadoo Beesha caalamka iyo Musharixiinta ay kasoo horjeesteen, waxaana Mareykanka uu ka fekerayaa cunaqabateyn isaga ka dhan ah.